कांग्रेसको उद्गम थलो मोरङमा साख फर्काउने शेखरको ‘मिसन’, को–को बन्दैछन् उम्मेदवार ?
राजनीतिक र औद्योगिक इतिहास बोकेको मोरङमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको टिकट हत्याउन मुख्य पार्टीभित्र नेताहरूको दौडधूप शुरू भएको छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि मनमोहन अधिकारीसम्मले राजनिति गरेको मोरङमा टिकटका ल...
लोकान्तर विशेषबाट थप
रुस र चीनलाई काउन्टर गर्ने जी७ रणनीति, कार्यान्वयन होला सुनदेखि पूर्वाधारका कुरा ?
जर्मनीको श्लोस एल्माउमा आइतवारदेखि शुरू भएको विश्वका शक्तिशाली मुलुक जी७को बैठकले रुसविरुद्ध एकजुट हुने तथा चीनको प्रभाव घटाउन पूर्वाधार विकास योजना अघि बढाउने संकल्प लिएका छन् । जी७ क्यानडा, फ्रान्स, ...
सेभेरोडोनेत्स्क पनि रुसको हातमा, डोनबास कब्जा गर्ने लक्ष्यबाट अब कति टाढा छन् पुटिन ?
शनिवार (जुन २५) मा रुसी सैनिक तथा डोनबास क्षेत्रका दुई जनगणतन्त्रका मिलिसियाले सेभेरोडोनेत्स्क शहर नियन्त्रणमा लिएका छन् । उक्त क्षेत्रबाट पछि हट्नका लागि युक्रेन सरकारले आफ्ना सैनिकहरूलाई शुक्रवार नै आदे...
गगन थापालाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेर चुनावमा जान तयार होला कांग्रेस ?
कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन सकिएलगत्तै गत पुस ९ मैले महामन्त्री निर्वाचित गगन थापासँग अन्तवार्ता लिने अवसर पाएको थिएँ । महामन्त्री निर्वाचित भइसकेपछि अब उनको ध्यान देशको कार्यकारी कि पार्टीको सभापति हुनेछ ? ...
काठमाडौंको चुनावी जोडघटाउ : स्वतन्त्रले ‘थ्रेट’ बढाउँदा कसलाई अगाडि सार्दैछन् ठूला दल ?
आसन्न संघीय चुनावलाई लक्षित गरेर धमाधम स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणाले ठूला राजनीतिक दलभित्र परकम्प सिर्जना गरिरहेको छ । स्थानीय चुनावमा जीतको आकलन नै नगरेका व्यक्तिले चमत्कारिक नतिजा निकालेको र संघीय चुन...
बाल्टिक क्षेत्रमा नयाँ तनाव– युद्ध नै निम्तिने गरी लिथुएनियाले किन खोज्यो रुससँग निहुँ ?
बाल्टिक सागरको तटमा रहेको युरोपेली मुलुक लिथुएनियाले कालिनिनग्राड क्षेत्रमा रुसी सामान लैजानबाट रोकेपछि रुसले लिथुएनियालाई गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ । लिथुएनिया र पोल्यान्डको बीचमा ...
अमेरिका, ईयू र बेलायती स्वार्थको भुमरीमा युक्रेन– जेलेन्स्कीसामु जम्माजम्मी २ विकल्प !
रुस–युक्रेन द्वन्द्व चार महिना पूरा हुन लाग्दा पनि कुनै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । यस युद्धले विशेषगरी युरोपलाई अप्ठ्यारो स्थितिमा ल्याएकाले युरोपका प्रभावशाली मुलुकहरू शान्तिबहालीका लागि प्रयास गर...
पियुषबहादुर अमात्यको व्यावसायिक पतनको कथा– कसरी लिलामीमा पुग्यो पाँचतारे फूलबारी रिसोर्ट ?
दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट आतिथ्यताको सेवा दिने पियुषबहादुर अमात्यले ३ दशक अगाडि देखेको पाँचतारे होटल सपना अन्ततः चकनाचुर भएको छ । सवा अर्ब रुपैयाँ ऋणले व्यवसायी पियुषबहादुर अमात्यलाई ओरालो यात्रामा मात्रै धक...
रुसलाई पश्चिमी प्रतिबन्धले छोएन, युक्रेन युद्धको अवधिमा कसरी गर्‍यो रेकर्ड आम्दानी ?
युक्रेनविरुद्ध सैन्य कारवाही चलाएबापत अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमले रुसमाथि कठोर आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि त्यसले रुसको अर्थतन्त्रमा कुनै असर पारेको छैन । उल्टो, रुसले युक्रेन आक्रमणको १०० दिनमा कीर्तिम...
झापाको चुनावी जोडघटाउ : विश्वप्रकाश मत सर्वेक्षणमा लाग्दा ओलीलाई चुनौती दिने को ?
कात्तिक वा मंसिरमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवारीका लागि टिकट सुरक्षित गर्न झापामा नेताहरूको दौडधूप शुरू भएको छ । प्रमुख दलका शीर्ष र प्रभावशाली नेताहरूको गृहजिल्ला झापामा टिकटको भागबण्डा लगाउन द...
आले उद्दण्डताको नालीबेली– आफैंले नियुक्ति दिएका व्यक्तिलाई किन गरे हातपात ?
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नेपाल वायु सेवा निगमका अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई हातपात र गालीगलौज गरेको विषय निकै चर्चामा छ । आफैंले नियुक्त गरेको व्यक्तिले आफूले भनेजस्तो काम न...
एसपीपीलाई त्यागेको एक मात्र राष्ट्र बेलारुस : किन तोड्यो अमेरिकी सेनासँगको सम्बन्ध ?
नेपालमा अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गतको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौताका सम्बन्धमा उठेको विवाद टुंगो लाग्न बाँकी छ । एसपीपीका कतिपय बुँदाहरूले नेपालको संवेदनशील भूराजनीतिक ...
संसदीय चुनावमा वाम गठबन्धन– हल्ला बढी, प्रगति शून्य !
स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले आशातित जीत निकाल्न नसकेपछि धेरैले चर्चा गर्ने गरेका थिए, आसन्न प्रदेश र संसदीय चुनावमा वामपन्थी गठबन्धन बन्ने भयो । स्थानीय तह चुनावमा पाएको मताधार हेर्दा एमाले एक्लै चु...
एसपीपीले निम्त्याएको तरंग : ‘राष्ट्रघात’तर्फ उद्यत भएका हुन् देउवा ?
अमेरिकी सेनाका जर्नेल चाल्र्स एन्थोनी फ्लिन नेपालमा रहेको समयमा एउटा गम्भीर प्रकृतिको सम्झौताको मस्यौदा बाहिरियो । फ्लिन नेपालमा रहँदा उच्च सुरक्षा अधिकारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत भेटेर स्...
युक्रेनलाई नेटोमा जोडिन प्रेरित गर्ने एसपीपी– नेपालमा लागू गर्न किन दबाब दिँदैछ अमेरिका ?
नेपालसँग सम्झौताका लागि अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी) विवादित बनेको छ । अमेरिकी सैनिकहरू अनिश्चित कालका लागि नेपालमा बस्न सक्ने प्रावधान समेत सम्झौताको मस्यौदामा राखिएकाल...
कांग्रेस–माओवादी तालमेलका तगारा : यस्ता केही निर्वाचन क्षेत्र जसले धरापमा पार्नसक्छ गठबन्धन !
राजनीतिक दलको मुख्य नेतृत्वको ध्यान आसन्न प्रदेश र संघीय चुनावमा केन्द्रित हुन थालेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा विश्लेषण र संघीय चुनावको तयारीका सम्बन्धमा दलका नेताहरू सघन छलफलमा छन् । कतिपयले भने संघी...
युक्रेनमा ‘प्रोक्सी वार’ हार्दै अमेरिका, आफैंले सघाएका जेलेन्स्कीमाथि किन खनिए बाइडन ?
रुसविरुद्ध युक्रेनलाई उचालेको अमेरिकाले युद्धमा युक्रेनको हार हुन लागेको अनुभव गरेपछि दोषारोपणको सिलसिला शुरू गरेको छ । अमेरिकाको बाइडन प्रशासनले गुप्तचर निकायहरूबाट सही सूचना नआएको भन्दै असफलताक...
एसिया पसिफिक क्षेत्रमा बढ्दो तनाव : ताइवानलाई लिएर चीन–अमेरिका आमनेसामने हुन लागेका हुन् ?
जेठ २९, २०७९
एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा विश्वका दुई महाशक्ति चीन र अमेरिकाबीचको प्रतिस्पर्धा थप चर्किने संकेत देखिएको छ । सिंगापुरमा आइतवार (१२ जुन) सम्म चलेको तीनदिवसीय शांग्रिला डायलगमा अमेरिकाका रक्षामन्त्री ल...
युद्धजत्तिकै पेचिलो गहुँको राजनीति : गोलाबारी युक्रेनमा, परिणाम भोग्दै अफ्रिका !
संसारमा गहुँको मूल्यवृद्धि भइरहेको बेलामा युक्रेनले आफ्नो भूमिमा फलेको गहुँ रुसले लुटेको आरोप लगाएको छ । युक्रेनविरुद्ध विशेष सैन्य कारवाही चलाइरहेको रुसले युद्धको खर्च उठाउनका लागि युक्रेनबाट लुटेक...
कात्तिक २५, २०७७